Top News | Infomala
एक भोट बराबर पाँच हजार रूपैयाँ
हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा भोट बराबर करिब पाँच हजार रुपैया खर्च भएको छ। त्यसमध्ये करिब तीन हजार छ सय १३ रुपैया उम्मेद्वार र उनका समर्थकले खर्च गरेका छन् भने प्रतिभोट एक हजार तीन सय नौ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका तर्फबाट विज्ञ समूहले करिब छ महिना लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार, तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको छ। उम्मेद्वार र उनका समर्थकले गरेको खर्च योभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी छ। उम्मेद्वार र उनका समर्थकहरूले ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। समितिका परियोजना प्रमुख उज्ज्वल अधिकारीले काठमाडौं, मोरङ, दाङ र जाजरकोट जिल्लालाई नमुनाको रूपमा लिई अध्ययन गरेको बताए।
कहाँ जान्छ तस्करीको सुन ?
सुरक्षा कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तस्करहरुले नेपाललाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाएर अबैध रुपमा ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी गरिरहेका छन् । अवैध रुपमा चीनसँगका विभिन्न खुल्ला नाका र त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सुन नेपाल भित्र्याउने र भारतसँगै तेस्रो बजारमा कारोबार [ थप …]
एनआरएन सँघको युरोप संयोजकमा डा. विनय श्रेष्ठको उमेदवारी
एनआरएन सँघ स्विटजरल्याण्डका आईसीसी सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष डा. विनय कुमार श्रेष्ठले सँघको युरोप संयोजकमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । एनआरएन सँघ स्विटजरल्याण्डको संस्थापक उपाध्यक्ष र दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहेका उनी एनआरएन अभियानमा विगत दस [ थप …]
एनआरएन सँघ अध्यक्षमा भट्टको उम्मेदवारी घोषणा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। शनिबार होटल अन्नपूर्णमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले २०१७—२०१९ कार्यकालका लागि आफू अध्यक्षको उम्मेदवार हुने बताएका हुन्। उम्मेदवारी घोषणा गर्न [ थप …]
उफ्! युरोपमा हुर्केका केटाकेटी …
दीपक राना सिद्धार्थको तीन सन्तान मध्येको सबैभन्दा जेठो छोरो हो । १९ वर्षको उमेरमै सहरका नामूद उद्योगपतिका छोराछोरीसँग उस्को बाक्लो हिमचिम भयो । छोराको साथीसँगाती देख्दा सिद्धार्थ छक्क प‍र्‍यो । एकाध वर्षपछि उसले असलियत बुझ्दैछ [ थप …]
Tagged with: पथिक प्रवासन